စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ - Neowise.org
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကို https://dubaicitycompany.com မှာတည်ရှိပါတယ်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုဖျောပွ။
ဤ website အားဝင်ရောက်အားဖြင့်ငါတို့သည်သင်တို့သည်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုလက်ခံယူဆ။ သင်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေား၏အားလုံးယူသဘောမတူဘူးလျှင်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီအသုံးပြုရန်အတွက်ဆက်လက်မထားပါနဲ့။
"သင်", "လိုင်း" နှင့် "သင့်" သင်ဒီ website နှင့်ကုမ္ပဏီ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများလိုက်နာပေါ်တွင်လူတစ်ဦးမှတ်တမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်အောက်ပါဝေါဟာရများသည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ, Privacy ဖော်ပြချက်များနှင့်ခွငသတိပြုပါအပေါင်းတို့နှင့်သဘောတူညီချက်များသက်ဆိုင်သည်။ "ဒီကုမ္ပဏီ", "မိမိတို့ကိုယျကို", "ကျနော်တို့", "ကျွန်ုပ်တို့၏" နှင့် "Us" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုရည်ညွှန်းသည်။ "ပါတီ", "ပါတီများ" သို့မဟုတ် "Us", အလိုင်းနှင့်ကိုယျ့ကိုယျကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုရည်ညွှန်းသည်။ အားလုံးအသုံးအနှုန်းများနှင့်အညီ, ကုမ္ပဏီ၏ဖော်ပြထားန်ဆောင်မှုများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များလေးစားမှုအတွက်လိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံများ၏ express ကိုရည်ရွယ်ချက်အရှိဆုံးသင့်လျော်သောထုံးစံအတွက်လိုင်းကြှနျတျောတို့၏အကူအညီများ၏ဖြစ်စဉ်ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောငွေပေးချေ၏ကမ်းလှမ်းမှုကို, လက်ခံမှုနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရည်ညွှန်း နှင့်နယ်သာလန်၏ပညတ်တိကရေပန်းစားမှဘာသာရပ်။ အဆိုပါအနည်းကိန်း, အများကိန်း, အရင်းအနှီးနှင့် / သို့မဟုတ်သူ / သူမဒါမှမဟုတ်သူတို့အတွက်အထက်ဝေါဟာရများသို့မဟုတ်အခြားစကားများမဆိုသုံးစွဲခြင်း, တူညီတဲ့ရည်ညွှန်းအဖြစ်လဲလှယ်ထို့ကြောင့်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။
မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်၎င်း၏လိုင်စင်ရဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီပေါ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းများအတွက်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုပိုင်ဆိုင်။ အားလုံးအသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု rights reserved နေကြသည်။ သင်တို့သည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ကန့်သတ်အကြောင်းမဲ့သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီကနေဒီကိုဝင်ရောက်စေနိုင်သည်။
ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီထံမှရောင်းချရန်, ငှားသို့မဟုတ် Sub-လိုင်စင်ပစ္စည်း
ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီထံမှပစ္စည်းမျိုးပွား, ပွားသို့မဟုတ် copy
ဤ website ၏အစိတ်အပိုင်းများ post မှအသုံးပြုသူများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့ဒေသများရှိလဲလှယ်ထင်မြင်ချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်အဘို့အခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီမတိုင်မီက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်မိမိတို့အထံတော်မှထင်မြင်ချက်များ, filter တည်းဖြတ်, ထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်မထားဘူး။ မှတ်ချက်များအမြင်များနှင့်အမြင်သဘောထားဒူဘိုင်းစီးတီး Company ၏၎င်း၏အေးဂျင့်များနှင့် / သို့မဟုတ် affiliates ပြန်ပါလာမည်မဟုတ်ကြဘူး။ မှတ်ချက်များကို၎င်းတို့၏အမြင်များနှင့်အမြင်သဘောထား post သူလူတစ်ဦး၏အမြင်နှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုထင်ဟပ်။ တည်ဆဲဥပဒေများကခွင့်ပြုသောအတိုင်းအတာအထိ, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီကမှတ်ချက်များအတွက်သို့မဟုတ်မည်သည့်တာဝန်ယူမှုအဘို့အထိုက်မဖြစ်ရကြလိမ့်မည်, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်စေသောနှင့် / သို့မဟုတ်မည်သည့်အသုံးပြုမှုနှင့် / သို့မဟုတ်၏စာတိုက်နှင့် / သို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်များ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်၏ရလဒ်အဖြစ်ခံစားခဲ့ရ ဤဆိုဒ်ပေါ်မှာ။
သငျသညျဤဥပဒေဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီသုံးမျိုးပွား, ပြင်ဆင်ရန်နှင့်မည်သည့်အပေါင်းတို့နှင့်ပုံစံများ, ကို formats သို့မဟုတ်မီဒီယာ၌သင်တို့၏ထင်မြင်ချက်များမဆိုအသုံးပြုမျိုးပွားခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ရန်အခြားသူများကိုခွင့်ပြုရန် non-သီးသန့်လိုင်စင်ပေးသနားတော်မူ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web site ကိုမှ hyperlinks မပြုစေခြင်းငှါအရာ non-profit အဖွဲ့အစည်းများ, မေတ္တာကုန်တိုက်ကြီးတွေနှင့်ပရဟိတရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကိုတောင်းခံခြင်း မှလွဲ. စနစ်တစ်ခုအသိအမှတ်ပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။
ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကဤအဖွဲ့အစည်းများထံမှလင့်ခ်တောင်းဆိုမှုများကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်: (က) လင့်ခ်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယျ့ကိုယျကိုမှသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိအမှတ်ပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှနှိုင်းကြည့်ရှုစေမှာမဟုတ်ဘူး; (ခ) အဖွဲ့အစည်းအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမဆိုအနုတ်လက္ခဏာမှတ်တမ်းများရှိသည်ပါဘူး, (ဂ) ဟိုက်ပါလင့်ခ်၏မြင်ကွင်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးအတွက်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ၏မရှိခြင်းအစားထိုးချေ; နှင့် (ဃ) link ကိုယေဘုယျအားအရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ၏ဆက်စပ်၌တည်ရှိ၏။
သငျသညျအထကျအပိုဒျ2အတွက်စာရင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုချိတ်ဆက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီတစ်ခုက e-mail ကိုပို့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားရမည်။ သငျသညျချင်ပါတယ်မှမူသောသင်တို့အမည်, သင်၏အဖွဲ့အစည်းအမည်, ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အဖြစ်သင့် site ၏ URL ကိုသင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လင့်ထားသည်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရာမှမဆို URLs များကိုစာရင်းတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင် URL များကိုစာရင်းတစ်ခုတို့ပါဝင်သည် ကျေးဇူးပြု. link ကို။ တစ်ဦးတုန့်ပြန်များအတွက် 2-3 ရက်သတ္တပတ်စောင့်ပါ။
ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အစာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ, သင်သည်မည်သည့်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အမြင်အာရုံတင်ဆက်မှုသို့မဟုတ်အသွင်အပြင်ပြောင်းလဲသောငါတို့က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုလှည့်ပတ် frames များကိုဖန်တီးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မဆို content များအတွက်တာဝန်ရှိကျင်းပမရကြလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မြင့်တက်ကြောင်းအားလုံးတောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်ခုခံကာကွယ်ဖို့သဘောတူသည်။ အဘယ်သူမျှမ link ကို (s) ကိုမဟုတ်ရင်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီအခွင့်အရေးများ၏ချိုးဖောက်မှုသို့မဟုတ်အခြားချိုးဖောက်မှုပေးဆောင်ရွက်ပြီး, သရေဖျက်မှုညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူစေခြင်းငှါမဆိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာ, ဒါမှမဟုတ်အားထိပါးရာသငျ့သညျ။
ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှသည်လင့်များသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှမဆိုအထူးသဖြင့်လင့်ခ်ကိုဖယ်ရှားတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သငျသညျခကျြခငျြးတောငျးဆိုခကျြအပျေါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အားလုံးကိုလင့်များဖယ်ရှားပစ်ရန်အတည်ပြု။ ကျနော်တို့ကဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုပြင်ဆင်ခွင့်ကိုလည်းကြိုတင်ယူထားကြောင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမူဝါဒကချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံကိုသင်ခညျြနှောငျနှငျ့ဤချိတ်ဆက်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာခံရဖို့သဘောတူသည်။
ထိုကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်သူများပရီမီယံအလုပ်ရှာဖွေရေး, စီးပွားရေး, ်ထမ်းခေါ်ယူမှု, နှင့်ကြော်ငြာအရောင်း Navigator အဖြစ်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီပရီမီယံ subscriptions ကို, Non-အမ်းဖြစ်ကြသည်။
သင်တို့သည်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ [/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column]